Crusades: पवित्र रोमन सम्राट फ्रेडरिक Barbarossa
इतिहास र संस्कृति कुञ्जी चित्र
क्रसस: फ्रेडरिक आई बारबारोससा
by केनेडी हिकमान
फ्रेडरिक आई बारबारोससा 1122 मा फ्रेडरिक द्वितीय, ड्यूक अफ डब्यू र उनको पत्नी जोडिथ मा जन्मिए। होहेनस्टाउफन राजवंश र वेल्फ हाउसको क्रमशः सदरमुकाम, बारबारोससाका आमाबाबुले उनलाई बलियो परिवार र वंश सम्बन्धी सम्बन्ध प्रदान गरे जुन पछि जीवनमा उनको सहयोग पुर्याए। 25 वर्षको उमेरमा उहाँ आफ्नो बुबाको मृत्यु पछि डुबियाको ड्यूक बन्नुभयो। त्यस वर्ष पछि उनले दोस्रो अराजकतामा जर्मनीको राजा, आफ्नो चाचा, कन्नराद तेस्रो साथ गरे।
क्रिसमसलाई ठूलो मात्रामा विफलता थियो, बार्बारोस्साले आफूलाई राम्ररी ग्रहण गरे र आफ्नो चाचाको सम्मान र विश्वास कमाई।
सन् 1949मा जर्मनीमा फर्केर फर्किए, बारबारोससा कन्रेराड नजिक र 1152 मा, राजा द्वारा उनको मृत्युमा राख्नुको रूपमा बुलाए। कन्रेरादको मृत्यु हुँदा, उनले इम्पीरियल सीलसँग बारबारोससा प्रस्तुत गरे र उनीहरूको इच्छा व्यक्त गरे कि तीस वर्षकी ड्यूक उसलाई राजाको रूपमा सफल भए। यो कुराकानी बामबर्ग को प्रिन्स-बिशप ले देखाएको थियो जसले पछि भन्यो कि कन्नराद उनको मानसिक शक्ति को पूर्ण स्वामित्व मा थियो जब उनको बरबारोस्सा उनको उत्तराधिकारी को नाम मा थियो। चाँडो सार्दै, बार्बारोस्साले राजकुमारको समर्थनको समर्थन गरे र4मार्च, 1152 मा राजा नामकरण गरे।
कोनरादको छ वर्षीय छोराले आफ्नो बुबाको स्थान लिनदेखि रोक्न सकेका थिए, बार्बारोससाले उनलाई ड्यूक अफ स्वाबिया नाम दिए। सिंहासनको छेउमा, बार्बारोससाले जर्मनी र पवित्र रोमन साम्राज्यलाई बहादुरी गर्न कोसिस गर्न चाहेको थियो जुन चार्लेम्यामेन अन्तर्गत प्राप्त भयो।
जर्मनीको माध्यमबाट यात्रा गर्दै, बार्बारोससाले स्थानीय राजकुमारहरूसँग भेट्थे र सेक्शनल संघर्षको अन्त्य गर्न काम गरे। कुनै पनि हात प्रयोग गरेर, उनीहरूले राजाको शक्तिलाई पुन: पालन गर्दा राजकुमारहरूको चासो एकजुट गरे। यद्यपि बारबारोससा जर्मनीको राजा भए तापनि उनी पोप द्वारा पवित्र रोमन सम्राटलाई तालिम दिइएनन्।
इटाली हुँदै मार्च
1153 मा, जर्मनीको चर्चको पप प्रशासन संग असुविधा को एक सामान्य भावना थियो। दक्षिण अफ्रिकामा आफ्नो सेनाको साथमा, बार्बारोससाले यी तनावहरूलाई शान्त पार्न खोजे र पोप एड्रियन चतुर्थको साथ सन् 1953 मा पेस एड्रियन चतुर्थको संधि समाप्ति गरे। संधिको शर्तले, बार्बारोससाले पोपलाई इटालीमा आफ्नो नर्मो दुश्मनसँग लड्न सहमत गरे। तातो रगतको सम्राट। ब्रिसियाको अर्नोल्डको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट गरे पछि, बार्बारोस्सा को 18 9, 11 55 मा पोप द्वारा मुकुट भएको थियो। घरको पछाडि फर्केर फर्किने बेला बार्बारोससाले जर्मन राजकुमारहरू बीचको नयाँ बेरोजगार सामना गर्यो।
जर्मनीमा काम गर्न शासक गर्न, बार्बारोससाले डुची को बवेरियालाई आफ्नो साना भाइचुरी हेनरी द शेरलाई द्यूक को सक्सनी दिए।99, 1156 मा, बर्बर्गमा, बारबारोससाले बिरुरिसको बर्गुडीलाई विवाह गरे। कहिल्यै पछुतो छैन, तिनले अर्को वर्ष स्वि्यान तेस र वाल्मोमरको बीच डेनिस गृहयुद्धमा हस्तक्षेप गरे। जून 11 58 मा, बार्बारोस्सा इटाली को एक ठूलो अभियान तैयार गरे। वर्षौंको मुकुट पछि, सम्राट र पोप बीचको बढ्दो दरार खुल्यो। जबकि बार्बारोस्सा मानिन्छ कि पोप सम्राटको अधीन हुनु पर्छ, एडानियन, Besançon को आहार मा, यसको विपरीत छ।
इटालीमा प्रवेश गर्दै, बार्बारोससाले आफ्नो शाही सार्वभौमिकता पुन: पेश गर्न खोजे।
देशको उत्तरी भागको माध्यमबाट स्वेच्छाले शहर र कब्जा गरेको मिलान7सेप्टेम्बर 11 119पछि शहरलाई पराजित गर्यो। एन्सेनियनले वृद्धि गरेपछि एपियनियनले सम्राटलाई सम्बोधन गरे, तथापि, कुनै पनि कार्यवाही गर्नुअघि मृत्यु भयो। सेप्टेम्बर 1195 मा, पोप अलेक्जेंडर तेस्रो स्थानमा निर्वाचित भयो र तुरुन्तै साम्राज्यमाथि दावी पपलको सर्वोच्चतामा सारियो। अलेक्जेन्डरका कार्यवाही र उनको प्रविधिको जवाफमा, बार्बारोस्सा विक्टर चतुर्थको शुरुवाती शुरुवात एन्टोप्सको श्रृंखलालाई समर्थन गर्न थाल्यो।
सन् 1962 मा बेलायतमा फर्कियो, हेनरी शेरको कारणले अशांतिलाई गुमाउन को लागी त्यो सिसिलीको विजय हासिल गर्ने लक्ष्यको साथ अर्को वर्ष इटाली फर्कियो। यी योजनाहरू तुरुन्तै परिवर्तन भयो जब उनी उत्तरी इटालीका विद्रोहीहरूलाई रोक्न आवश्यक थियो। 1166 मा, बारबारोससा मान्टे पोर्जियो को युद्ध मा निर्णायक जीत जीता रोम तिर आक्रमण गरे।
उनको सफलताले छोटो साबित भयो किनभने रोगले आफ्नो सेनालाई पराजित गर्यो र जर्मनी फर्कियो। छ वर्षको लागि आफ्नो दायित्वमा रहँदा, उनले इङ्गल्याण्ड, फ्रान्सेली र बाइजान्टिन साम्राज्यसँग राजनयिक सम्बन्ध सुधार गर्न काम गरे।
यस समयमा, धेरै जर्मन पादरीहरूले पोप सिकंदरको कारण लिन थाले। घर मा यस अशांति को बावजूद, बारबारोससा फेरि एक ठूलो सेना बनाए र इटाली मा पहाड पार गर्यो। यहाँ उनले लोम्बारड लीगको संयुक्त सेनालाई भेट्टाए, पोपको समर्थनमा लड्ने उत्तरी इटालियन शहरहरूको गठबन्धन। धेरै विजय हासिल गरेपछि, बार्बारोससाले हेनरी शेरलाई सुदृढीकरणमा सहभागी गरे। आफ्नो चाचाको सम्भावना हार मार्फत आफ्नो शक्ति बढाउन आशा गर्दै हेनरीले दक्षिण आउन अस्वीकार गरे।
मई29, 1176 मा, Barbarossa र उनको सेना को डिटेक्शन Legnano मा खराब तरिकाले हराएको थियो, संग सम्राट को युद्ध मा मारिएको विश्वास संग। 24 मार्च, 1177 मा उनको भेनिसमा बार्बारोसस्ले अलेक्जेंडरसँग शान्ति बनाए। लोभले अक्सिजनको रूपमा पोपको पहिचान गरेपछि उनको बहिष्करण हटाइयो र उनले चर्चमा पुनर्स्थापना गरे। शान्तिले घोषणा गरे, सम्राट र तिनको सेनाले उत्तर दिए। जर्मनीमा आइपुगे, बार्बारोससाले हेनरी शेरलाई आफ्नो अधिकारको खुला विद्रोहमा भेट्टाए। सक्सोनी र बभेरियालाई आक्रमण गर्दै, बार्बारोससा हेनरीको भूमिलाई समात्न लगाए र त्यसलाई निर्वासनमा लगाइयो।
यद्यपि Barbarossa पोप संग मिलाएको भए तापनि उनले इटाली मा आफ्नो स्थान बलियो बनाउन कार्यहरू गरे। 1183 मा उनले लोम्बारड लीगको साथ एक संधिमा हस्ताक्षर गरे, उनलाई पोपबाट विभाजन गरे।
साथै, उनको छोरा, हेनरी, विवाह गरे सिसिलीको नर्मन राजकुमारी, र 1186 मा इटालीको राजालाई घोषणा गरिएको थियो। यी रोमीहरूले रोमसँग तनाव बढाएपछि यो 11911 मा तेस्रो क्रससेटको लागि बोरोबारोससालाई रोक्न सकेन।
रिचर्ड आई इङ्गल्याण्ड र फ्रान्सको फिलीप II सँग संयोजनमा काम गर्दै, बार्बारोससाले सालदिनबाट यरूशलेम फिर्ता लिनको लक्ष्यको साथ एक विशाल सेना गठन गरे। जबकि अंग्रेजी र फ्रांसीसी राजाहरूले आफ्नो सेनाको साथ समुद्रमा पवित्र भूमिमा यात्रा गरे, बार्बारोस्साको सेना धेरै ठूलो थियो र ओभरल्याण्डलाई मार्न बाध्य भए। हंगेरी, सर्बिया र बज्जाइनिन साम्राज्य को माध्यम ले जान्छ, उनि Bosporus मा एनाटोलिया मा पार गरे। दुई लडाइँ लड्न पछि उनी दक्षिणपन्थी एनाटोलियामा सेलिफ नदीमा आइपुगे। जब कथाहरू भिन्न हुन्छन्, यो जान्छ कि बारबारोससा 10, 1190 मा मृत्यु भएको बेलामा हिउँद वा नदी पार गर्दा। उनको मृत्यु सेनाभित्र अराजकता भयो र मूल बलको मात्र एक सानो भाग, नेतृत्वको स्वाबियाका छोरा फ्रेडरिक VI, एक्रोन पुगे ।
चयन गरिएका स्रोतहरू
फ्रेडरिक आई बारबारोससा
सम्राट फ्रेडरिक बारबारोससा
मध्ययुगीन स्रोत पुस्तिका: फ्रेडरिक बारबारोससा र सिकंदर III
द्वितीय विश्व युद्ध: जनरल उमर ब्राडली
द्वितीय विश्व युद्ध: जनरल बेंजामिन ओ। डेविस, जूनियर
Geronimo को जीवनी: भारतीय मुख्य र नेता
दोस्रो विश्वयुद्ध: कर्नल जनरल लुडविग बेक
निजी व्यक्ति र समुद्री डाकू: ब्ल्याकबेयर - एडवर्ड सिखाई
विश्व युद्ध I: सार्जेंट एल्विन सी। यर्क
क्रसस: किंग रिचर्ड म इङ्गल्याण्डको लियनाथर्ट
द्वितीय विश्व युद्ध: फील्ड मार्शल वाल्टर मोडेल
अमेरिकी नागरिक युद्ध: मेजर जनरल पैट्रिक क्लेबर्न
द्वितीय विश्वयुद्ध: जनरल जिमी डूल्याटीटी
Festa della Repubblica Italiana को इतिहास
हिन्दु देवी शाणी देवको बारेमा जान्नुहोस्
फेयरलेघ डिकिन्सन, महानगरीय प्रवेश
उच्च प्रभावकारी विद्यालय प्रिन्सिपलका विशेषताहरू
साइड दृश्य मिरर कसरी बदल्नुहोस्
फ्री डेल्फी घटक सेट
एशियामा नामाड र बसोबास गर्ने व्यक्ति
7 काले पर्यावरणवादीहरूले कसलाई बनाउँदैछन्
4 घडीको लागि घर्षण घाट
HTML फ्रेमहरूमा नवीनतम
कलेजको माध्यमबाट टिपटोइङ
जल गहिराइ र सुरक्षित डाइविंग
प्रोफाइल: Angonoka कछुआ
युवा कर्मचारी विकास र वृद्धिका लागि शीर्ष पुस्तकहरू
संघीय यौन हिंसा रोकथाम कार्यक्रम लिमिटेड भ्रम द्वारा
भोटहरू के हुन्?
डेलिभर ड्यानको जीवनी
धन्य भर्जिनिया मरियमको आशा
के यो नलीबाट पानी पिउन सुरक्षित छ?
अंग्रेजी-जर्मन शब्दावली: इन डेर शूल - मा स्कूल